कस्ता व्यक्तीले कति मुखे रुद्राक्ष लगाउने ?
एजेन्सी /&nbsp;ज्योतिशास्त्रकाअनुसार विभिन्न पेशागत मानिसहरुले त्यसै अनुसारको रुद्राक्ष लगाउँदा लाभ हुन्छ । पढाई सुर्धान, व्यवसाय राम्रो बनाउँन साथै पारिवारीक सम्बन्ध सुधार्नमा समेत रुद्राक्षले असर गर्दछ । राजनीतिसँग जोडिएक
2140 पटक पढिएको
सपनामा के देखे के हुन्छ ? जान्नुहोस् सपनाको फल
एजेन्सी / हामीले राती सुत्दा देखेको सपनाले हाम्रो दैनिक जिवनलाई निकै असर गरिरहेको हुन्छ । नराम्रो सपना देख्दा कहि नराम्रो पो हुने हो कि भन्ने पिरले हामीलाई सताइरहेको हुन्छ । यहाँ केही सपनाहरु र यसका फलका बारेमा जानकारी दिइएको �
प्रकाशित मितिः मंसिर, 1, 2075
5071 पटक पढिएको
पागल प्रेमीका, जसले आफ्नो नाइटो काटेर दिइन् प्रेमीलाई उपहार
एजेन्सी /&nbsp; प्रेमले मानिसलाई पागल बनाइदिन्छ भन्ने कथनलाई प्रमाणित गदै मेक्सिकोकी एक प्रेमिकाले आफ्ना प्रेमीलाई नाइटो काटेर उपहार दिएकी छिन् । २३ वर्षकी ती युवतीले आफ्नो प्रेमीलाई खुसी पार्नका लागि यस्तो उपहार दिने सोँच बनाइ
6385 पटक पढिएको
7659 पटक पढिएको
6803 पटक पढिएको